विप्लवको नाम सुन्ने बित्तिकै प्रचण्डले भने मलाइ मार्न खोज्नुभएको थ्यो २ सेकेन्डले बाचे !! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
विप्लवको नाम सुन्ने बित्तिकै प्रचण्डले भने मलाइ मार्न खोज्नुभएको थ्यो २ सेकेन्डले बाचे !!
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले क्रान्ति गर्न कसैलाई नरोकेको स्पष्ट पारेका पारेका छन्। उनले खासगरी आफूबाट टाढिएका पूर्वसहकर्मी नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र मोहन वैद्य किरण प्रति लक्षित गर्दै यस्तो टिपप्णी गरेका हुन्।
२०७० को निर्वाचनमा कञ्चनपुरमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीले प्रहार गरेको बमबाट आफू बालबाल बचेको समेत स्मरण गर्दै विपलवको नाम सुन्ने बितिकै कडारुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘म २ सेकेन्डको अन्तरले बाचे मेरो हत्या गर्न खोजिएकै हो।’ विप्लवले भने जस्तो आफूमा कुनै विचलन नआएको पनि प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्।
संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लडेको माओवादी पुरानै धारमा फर्किन खोजेपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी बाट वैद्य नेतृत्वमा विप्लव , वादल सहित तत्कालीन माओवादीका प्रभावशाली नेता बाहिरिएका थिए । २०७० को निर्वाचन गरेको वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले बहिष्कार गरेको थियो । भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पछिल्ला सबै निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो ।